COVID19 : HAHEMOTRA NY FIVERENANA AN-DAKILASY HIAROVANA IREO ZANATSIKA - Transparency International - Initiative Madagascar
COVID19 : HAHEMOTRA NY FIVERENANA AN-DAKILASY HIAROVANA IREO ZANATSIKA
Nivoaka ny 12 Mey 2020 ao amin'ny
Eo anatrehan’ny fitotonganan’ny zava-misy manodidina ny valanaretina COVID19 indrindra ny fiakaran’ireo ankizy tratry ny aretina, ny fikambanana mambra ao amin’ny « Firaisamonim-pirenena misehatra eo amin’ny fanabeazana» dia mamerina ny fanambarana natao tamin’ny faha-20 aprily 2020 izay mbola mitombina hatrany. Mamporisika ny fanamafisana ny fitsapana mba ahafahana mandrefy mametra ary ny fielezan’ny valanaretina ary mamerina mitaky indray ny hampiatoana ny fampianarana ary hanemorana ny fidirana an-tsekoly mandrapaha azo antoka tanteraka fa foana ny loza ary tomombana ny fenitra fiarovana ny ankizy mpianatra.
Noho izany, ny firaisamonimpirenena voatanisa etsy ambony dia mampatsiahy fa ny voalohany indrindra amin’ny iraka iantsorohany dia ny fiarovana ny tombotsoa ambony sy ny fananana iombonan’ny mpiray firenena, anisan’izany ny zaza malagasy sy ny tanora.
Nandritra ny lahateniny ho an’ny Firenena sy ny vahoaka malagasy dia nanambara ny fiverenan’ireo mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana amin’ity taom-pianarana ity any an-dakilasy ny Filoham-pirenena ka ny alarobia 22 aprily izany ho an’ny kilasy famaranana sy kilasy faha-9, ny alatsinainy 27 aprily kosa ho an’ny kilasy faha-5. Na dia nanome toky aza anefa izy ny amin’ireo fepetra horaisina amin’ny fanatanterahana izany fanapahan-kevitra izany, toy ny :
- Fanajana ny elanelana 1 metatra ka mpianatra iray isaky ny latabatra;
- Ny fanaovana aron-tava izay ho zaraina amin’ny mpianatra rehetra;
- Ny fizarana “Covid Organics” ho sotroin’ny mpianatra.
dia velon’ahiahy sy mametram-panontaniana ihany ny ray aman-dreny ary ny sarambabem-bahoaka mihitsy amin’ny ankapobeny, raha tena ampy sy tomombana tokoa ireo fepetra ireo ary mitaky fanazavana misimisy kokoa mba hatoky sy handry saina :
- Ny toetry ny efitrano fianarana amin’izao fotoana izao sy ny isan’ny mpianatra iray kilasy izay mazana maro ve ahafahana mametraka mpianatra iray isaky ny latabatra ? Inona fepetra noraisina hihoarana amin’izany?
- Moa ve ny mpampianatra miandrakitra ny kilasy mpanao fanadinana efa voaomana sy ampy isa amin’ny fiatrehana izao fandaminana vaovao izao ?
- Moa ve ny fepetra noeritreretina mahakasika ny fitateram-bahoaka ho tena voahaja ary koa tena ahafahana manaja ny fenitra ara-pahasalamana iarovana ny mpandeha, izay anisan’izany ireo mpianatra ? Inona avy ny fepetra noraisina mahakasika ny famonoana otrikaretina anatin’ireo fiara mpitatitra iombonana ? Isaky ny fotoana manao ahoana no hanaovana izany ary inona no iantohana fa ho tanteraka izany ?
- Vonona tokoa ve ny Fanjakana hanome aron-tava ampy ho an’ny mpianatra rehetra na avy amin’ny sekolim-panjakana na avy amin’ny sekoly tsy miankina ? Firy ny isan’ny aron-tava ho zaraina ? Avy aiza izy ireny ? Manara-penitra ve ireo aron-tava ireo ? Azo sasana ve ary ny tokantrano tsirairay ve manana ny fitaovana ilaina ahafahany manasa ary ireo araka ny tokony ho izy ?
- Miteraka fanontaniana marobe sy fisalasalana eo amin’ny ray aman-dreny fa indrindra eo amin’ny tontolon’ny Fahasalamana sy ny Fikarohana ny fizarana ilay fanafody Covid-Organics amin’ny ankizy, hoe tena mahasoa sy tena ilaina tokoa ve, indrindr fa mbola hiditra anaty andrana klinika ny dingana misy ankehitriny
Manoloana ireo toe-java-misy amin’izao fotoana izao ireo àry, dia mihevitra izahay fa lasa aloha loatra ny fiverenan’ny ankizy malagasy any an-tsekoly.
1) Manentana ireo tomponandraikitry ny sekoly izahay (tsy miankina sy fanjakana), indrindra ny ray aman-dreny, mba tsy handray fanapahan-kevitra mety hampidi-doza na hananontanona ny ain’ny zanaka/mpianatra sy ny fianakavian’izy ireo. Tsy maintsy hisy ny fanadinana ary tsy maintsy ho hita ny fomba hanemorana sy hamaritana fandaharam-potoana vaovao raha manana fahavononana amin’izany ny Fanjakana.
2) Manao antso avo ny Governemanta izahay mba hiaro ny sarobidy amintsika indrindra dia ireo sombin’ny aintsika ary :
Atsahatra avy hatrany ny fandehanan’ny mpianatra mpaka fanadinana any an-tsekoly. Hahemotra ny fidirana any an-dakilasy mandrapahazoana antoka tanteraka fa foana ny loza ary tomombana ny fenitra fiarovana rehetra mahakasika ny fitaterana sy fandraisana
Handray ny zava-misy ankehitriny ho fanararaotra ahafahana mampihatra ny tetiandron’ny PSE ka manemotra ny tetiandro sy ny fidirana manaraka mba hanakely ny fotoam-pianarana mandritra ny fahavaratra sy ny maitso ahitra.
Hampiasa ny rafitra fifanakalozan-kevitra - PNPSE (Plateforme nationale pour le PSE) amin’ny fakana ny hevitr’ireo mpandray anjara rehetra amin’ny Sehatry ny Fanabeazana alohan’ny handraisana fanapahan-kevitra. Tokony hifampidinihana mialoha ny fanomezana ny ankizy ilay fanafody.
Antananarivo, 08 may 2020